အဖိနှိပ်ခံတို့ အသံ: April 2013
အကြောင်းအရာ ။ ။ မြို့နယ်ထွေအုပ်မှ သိမ်းဆည်း၍ သီးစားချထားသော လယ်ယာမြေများ
၁ ။ ဧရာဝတီတိုင်းဒေသကြီး ၊ မော်လမြိုင်ကျွန်းမြို့နယ် ၊ ကြက်လျှာစံပြကျေးရွာအုပ်စု ၊ အောင်သုခ ကျေးရွာရှိ တောင်သူ ဦးပေါစံ (ခ) ဦးမင်းအောင် နှင့် အခြား (၇) ဦး လုပ်ကိုင်နေ သောလယ်ယာမြေ ဧက (၅၀) ကို ၁၉၉၅ ခုနှစ်တွင် ကျေးရွာ အုပ်ချုပ်ရေးမှ သိမ်းဆည်းခဲ့ပါသည် ။
Posted by Wai Lin Aung at 8:59 AM
မြန်မာသံတော်ဆင့်: စာရေးဆရာကျော်ဝင်း သို့ ပြန်လှန်ဆွေးနွေးချက်
မြန်မာသံတော်ဆင့်: စာရေးဆရာကျော်ဝင်း သို့ ပြန်လှန်ဆွေးနွေးချက်: အင်းစိန်တောရကျောင်းနေဘက်ကိုကျော်ဝင်းရဲ့ “ ပြည်တွင်းငြိမ်းချမ်းရေးတွေးမိသည်များ” ဆိုတဲ့စာကိုဖတ်လိုက်ရတယ်။ ကိုယ်အသက်ရှင်နေခိုက် ပြောသင့်...
Posted by Wai Lin Aung at 7:48 AM
ကိုးဒီသွေး: ဦးခင်ညွန့်၊ ဒီပဲယင်းလူသတ်ပွဲ၊ ကိုမြင့်ရွှေနဲ့ ဘန်ေ...
ကိုးဒီသွေး: ဦးခင်ညွန့်၊ ဒီပဲယင်းလူသတ်ပွဲ၊ ကိုမြင့်ရွှေနဲ့ ဘန်ေ...: ၂၀၀၃ ဒီပဲယင်း လူသတ်ပွဲ ဖြစ်ပွားတုန်းက ဦးခင်ညွန့် (ထိုစဉ်က ထောက်လှမ်းရေး အကြီးအကဲ) က သူ့လူတွေလွှတ်ပြီး ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ကို ကယ်တင်ခဲ့တယ်လို...
Posted by Wai Lin Aung at 7:12 AM
ပဲခူးတိုင်း၊ မဟာကြီး အနောက်ရပ်ကွက် ၀ါးမရမ်းကျေးရွာ ကွင်းအမှတ်(oss ၇၆) ကြေးတိုင်ပြင်ကွင်း ၊ဦးပိုင်အမှတ်(N266/1.2) သည် ယခင် ဦးအောင်ဆန်းနှင့် ဦးအေးကြည်ပိုင် ခြံမြေ များဖြစ်ပါသည်။
၄င်းခြံမြေများပေါ်ကို တွင် ထောက်ပို့တပ်မှ မလျော်သြဇာကို အသုံးပြုလျက် ၃၀.၆.၂၀၁၂ တွင် ကျူးကျော်ဝင်ရောက်ခဲ့ပါသည်။
Posted by Wai Lin Aung at 5:14 AM
Aung Myo Oo and2other friends shared Nay Thiha's photo.
၂၅. ၄. ၂၀၁၃ နံနက်ပိုင်း လက်ပံတောင်းတောင်တွင် ဒေသခံများနှင့် လုံခြုံရေးအဖွဲ့ဝင်များပဋိပက္ခဖြစ်ပွားမှုကြောင့် ဒဏ်ရာရရှိ၍ နေ့လည်(၁၂း၁၀)နာရီ မုံရွာဆေးရုံကြီးသို့ ရောက်ရှိလာသော ရွာသားများကို မုံရွာဆေးရုံကြီးမှ တာဝန်ရှိသူများက အထူးဂရုစိုက် ကုသပေးနေပြီး မုံရွာခရိုင် အမျိုးသားဒီမိုကရေစီ အဖွဲ့ချုပ်၊ မုံရွာမြို့နယ် အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ် နှင့် BG သွေးအကူအညီပေးရေးအဖွဲ့မှ တာဝန်ရှိသူများက လိုအပ်သည်များကို အသင့်စောင့်ကြိုကူညီခဲ့ကြသည်။
Posted by Wai Lin Aung at 6:14 AM
Min Naing and4other friends shared Maha Mingyi's photo.
Posted by Wai Lin Aung at 6:12 AM
နိုင်ငံသားများ၏ မူလအခွင့်အရေးနှင့် ဒီမိုကရေစီ လူ့အခွင့်အရေးကော်မတီ၊
ရက်စွဲ။ ။ ၂၀၁၂ ခုနှစ်၊ အောက်တိုဘာလ( )ရက်။
အကြောင်းအရာ ။ ။ အဓမ္မမြေယာသိမ်းဆည်းခြင်းခံရသည့်အတွက် နစ်နာမှုအား ဥပဒေနှင့်အညီ
၁။ ကျွန်တော် ဦးဘလှသည် ရန်ကုန်တိုင်ဒေသကြီး၊ ဒဂုံမြို့သစ်(ဆိပ်ကမ်း)မြို့နယ်၊ ယခင်ဆင်ခြေရာကွင်း၊ (၈၉)ရပ်ကွက်၊ စက်မှုဇုံ(၂)၊ ကျန်စစ်သားလမ်းမကြီးတွင် နေထိုင်သူ တစ်ဦးဖြစ်ပါသည်။
၂။ ကျွန်တော်၏ မိခင်ဒေါ်မြနှင့် ညီမဖြစ်သူ မခင်မာချိုတို့စိုက်ပျိုးလုပ်ပိုင်ခွင့်ရရှိခဲ့သော ဆင်ခြေရာကွင်း၊ အမှတ်(၄၄၇) Bတွင် စုစုပေါင်း(၇.၉၂)ဧက ဖြစ်ပါသည်။
Posted by Wai Lin Aung at 10:39 PM
လူ့ဥစ္စာစား ဘုန်းကြီးများ မတရားလွန်းလှသည်။
ပြဿနာ မဖြစ်အောင် ထိန်းသိမ်းပေးသော ဆရာတော် များ သည် လူ့လောက မြေပြင် အနတမဂ္ဂ ရှိလှပေသည်။ ထိုကြောင့် လူဥစ္စာစား ဘုန်းကြီးများ မတရားသည် ဟု မဆိုထိုက်လှပေ။ ဘာသာ နှင့် သာသနာကိုစောင့်ရှောက့်ရင်း တိုင်းပြည်လူမျိုးကိုပါစောင့်ရှောက်နေသော ဆရာတော်တို့သည် တန်ဖိုးမှာ အလွန်တရာကြီးမြှင့်လှပေ၏။
Posted by Wai Lin Aung at 12:28 AM
How much does it cost to + Verb ? ကိုအသုံးပြုနိုင်ပါတယ်
ဥပမာ...How much does it cost to fly to Europe ?
( ဥရောပကို လေယာဉ်နဲ့သွားရင် ဘယ်လောက်ကုန်ကျသလဲ )။
မိမိပြောချင်နေတဲ့ Verb 1 ကြိယာများကိုကပ်သုံးလိုက်ပါ။
Posted by Wai Lin Aung at 1:41 AM
နွားတို့သည် စားကျက်မြေတွင် နေရာအနှံ သွားလာ စားသောက်ခွင့်ရှိ၏။ စားကျက်တွင်ရှိသော မြက်နုနု ချိုချိုလေးများကို စားသောက်ခွင့် ကို အလိုအလျောက် ရထားပေသည်။ သို့သော် နွားတို့သည် လူတို့စိုက်ပျိုးထားသော် မြေပဲ၊နှမ်း နှင့်ပြောင်း စသည့် စိုက်ခင်း များကို ၀င်ရောက်စားသောက်ခွင့် ကို ကား မရပါချေ။
Posted by Wai Lin Aung at 10:49 PM
Ko Oo + Ma Thandar: “ကိုစံရှင် နှင့် ကိုယ့်သေတွင်း ကိုယ်တူးသူများ” (ေ...
Ko Oo + Ma Thandar: “ကိုစံရှင် နှင့် ကိုယ့်သေတွင်း ကိုယ်တူးသူများ” (ေ...: “ဂျီးဒေါ်ရေ … ဂျီးဒေါ် … … … …” “ဟယ် … တူမလေး ဆွဲမိ။ မြို့ကို ဈေးဝယ် တက်လာတာလား …။ စပါးတွေရော ရိတ်လို့၊ သိမ်းလို့ ပြီးပြီလား” “ပြောချင...
Posted by Wai Lin Aung at 10:36 PM
Ko Oo + Ma Thandar: ကျနော် မမေ့တဲ့ လေထီးဗိုလ်အုန်းမောင် (ရဲဘော်ဖိုးသံေ...
Ko Oo + Ma Thandar: ကျနော် မမေ့တဲ့ လေထီးဗိုလ်အုန်းမောင် (ရဲဘော်ဖိုးသံေ...: ဦးလေး ဗိုလ်အုန်းမောင်ကို ကျနော် ၉-၁၀ နှစ်သားအရွယ်တုန်းက ရန်ကုန်ထောင်ကြီးထဲမှာ ပတမဆုံး အကြိမ်အဖြစ် တွေ့ဖူးခဲ့တာဖြစ်ကြောင်း ကျနော် ရေးပြခဲ့ဖူ...
Posted by Wai Lin Aung at 10:30 PM
တစ်ခါတုန်းက အမေရိကန်ရဲ့ မြို့ လေးတစ်မြို့ မှာ အဖိုးကြီးတစ်ယောက်နေတယ်။ သူ့ ရဲ့ တစ်ဦးတည်းသော သားလေးကတော့ ထောင်ထဲမှာနေနေရရှာတယ်။ အဖိုးအိုက သူ့သားဆီကို စာရေးတယ်၊ စာထဲမှာတော့...
အဖေတော့ စိတ်မကောင်းပါဘူးသားရေ၊ ဒီနှစ်ထဲမှာ အဖေတော့ ခြံထဲမှာ အာလူးတွေ စိုက်လို့ ရမယ်မထင်လို့ ပါ သားရေ။ အဖေကလည်း အသက်ကလည်းကြီးလာပြီးဆိုတော့ ခြံမြေတွေကို တူးဆွဖို့ ကလည်း သိပ်မတတ်နိုင်တော့ဘူး။ သားသာ ဒီမှာရှိနေရင် ဒီဒုက္ခတွေရှိတော့မှာမဟုတ်ဘူး။ သားသာ ထောင်ထဲကို ရောက်မနေရင် ဒီခြံမြေတွေကို သားက တူးဆွပေးမှာနော်။
Posted by Wai Lin Aung at 10:10 PM
၁၉၆၂ခု ဇူလိုင် ၇ ရက် ကျောင်းသား အရေးတော်ပုံ ကိုယ်တွေ့ ကြုံခဲ့သူများရဲ့ ပြောပြချက်
Posted by Wai Lin Aung at 3:07 AM
မိုးမခ မီဒီယာ - MoeMaKa News & Media: Maung Swan Yi - Poem
မိုးမခ မီဒီယာ - MoeMaKa News & Media: Maung Swan Yi - Poem: ပင်လယ်ကမ်း လမ်းလျှောက်ထွက်ရအောင် မောင်စွမ်းရည် ဧပြီ ၁၂၊ ၂၀၁၃ ပင်လယ်ကမ်း လမ်းလျှောက် ငါးတကောင် ကောက်မိ။ ပုလဲတလုံး တွေ့တော့ ငါးကိုေ...
Posted by Wai Lin Aung at 3:06 AM
မိုးမခ မီဒီယာ - MoeMaKa News & Media: Maung Luu Yay - Letpadaung Article # 7
မိုးမခ မီဒီယာ - MoeMaKa News & Media: Maung Luu Yay - Letpadaung Article # 7: ကမ္ဘာမှာ ကလေးတွေသေနေတာဟာ ရေမသန့်လို့ မောင်လူရေး၊ ဧပြီ ၄၊ ၂၀၁၃ (လက်ပံတောင်းကို ဖတ်ရှုခြင်း အပိုင်း ၇) ရေနဲ့ကင်းပြီး...
မိုးမခ မီဒီယာ - MoeMaKa News & Media: Wayyan (Taung Gyi) - Cartoon
မိုးမခ မီဒီယာ - MoeMaKa News & Media: Wayyan (Taung Gyi) - Cartoon: ဤတနှစ် သိကြားမင်း ဆင်းကဒ်စီး၍ ဆင်းလတ္တံ့ ကာတွန်း - ဝေယံ (တောင်ကြီး) ဧပြီ ၁၀၊ ၂၀၁၃
Posted by Wai Lin Aung at 3:03 AM
Posted by Wai Lin Aung at 7:06 AM
ရက်စွဲ့။ ။ ၂၀၁၃ ခုနှစ် ဧပြီလ ( ၁၇ )ရက်
အကြောင်းအရာ။ ။ဘိုးဘွားမိဘ လက်ထက်မှ လုပ်ကိုင်လာသည့် လယ်ယာမြေကို ဒဂုံမြိုသစ်(ဆိပ်ကမ်းမြို့နယ်) မြို့နယ် အုပ်ချုပ်ရေးမှုး ဦးမျိုးစိုးမိုး မှ မတရားဝင်ရောက် မြေတူး ရောင်းချခြင်းကိစ္စ။
အကြောင်းအရာပါကိစ္စနှင့်စပ်လျှင်း၍ ၈၉ရပ်ကွက် ဒဂုံဆိပ်ကမ်းမြို့နယ်၊ ကျွန်မဒေါ်တင်ဌေးဝင်းနှင်အစ်ကိုဦးမြလွင်ပိုင်ဆိုင်သောကွင်းအမှတ်(၄၄၉)၊ ဦးပိုင်အမှတ်၁၃/၁ ၏ကျီးပင်ရိုးကွင်း လယ်မြေများပေါ်တွင် မတရားကျူကျော်ဝင်ရောက် မြေတူးမြေသယ် မြေရောင်းစားသည် ကို ဒဂုံဆိပ်ကမ်း မြို့နယ် လယ်သမားသမဂ္ဂ ကို (၁၅၊၃၊၂၀၁၃)ရက်နေတွင် တိုင်ကြားခဲ့ပါသည်၊
Posted by Wai Lin Aung at 12:04 AM
Posted by Wai Lin Aung at 4:26 AM
(ဦးစံဝင်းမြင့် - ဦးမြင့်သိန်း - ဦးသောင်းလွင်-ဦးနိုင်ဝင်း - ကိုဇော်ကြီး)လူစွမ်းကောင်းများ
မနက်ဖြန် 9-4-2013 နံနက်9နာရီ မင်္ဂလာဒုံ ရဲစခန်း
ဆင်ဖုံကျေးရွာ နှင့် သင်္ဃန်းကျွန်းကြီးကျေးရွာ ပေါက်တလောက်ကျေးရွာများမှ လယ်သမား ၅ ဦး (ဦးစံဝင်းမြင့် - ဦးမြင့်သိန်း - ဦးသောင်းလွင်-ဦးနိုင်ဝင်း - ကိုဇော်ကြီး) တို့အား ဇေကမ္ဘာ မြင့်ဇော် မှ တရားစွဲဆိုထားသည့်အမှုကို မင်္ဂလာဒုံ ရဲစခန်းမှ အမှုမြောက်ကြောင်းဖြင့် ပြန်လည်ပြောဆိုကာ ရဲစခန်းကိုမနက်ဖန် ထပ်မံခေါ်သည်ဟုသိရသည်။
Posted by Wai Lin Aung at 5:31 AM